आइतबार, १ असोज, २०७४
राजधानीमा जारी “सुबिसु क्यान कमटेक २०१७” को हिजो तेस्रो दिन अवलोकनकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यसहित क्यान महासंघको आयोजनामा बिहिवारदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भइरहेको क्यान कमटेक प्रदर्शनी आज समापन हुँदैछ ।
शनिबार कमटेकलाई उच्चस्तरका व्यक्तित्वले समेत अवलोकन गर्नुभयो । पूर्व प्रधानन्याधिश एवं मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित राजनीतिक क्षेत्रमा उच्च अधिकारी, सरकारी प्रतिनिधिको टोलीले कमटेक अवलोकन गरेको थियो ।
यस संस्करणलाई सञ्चार प्रविधि र सुरक्षा प्रविधिको विशेष प्रदर्शनीको रुपमा सञ्चालन गरिएको छ । विश्वविख्यात कम्पनीदेखि स्थानीयस्तरका कम्पनीले ल्याएका वस्तु र सेवाको एकै थलोमा प्रदर्शनी भएको छ । मेलाको तेस्रो दिन अधिकांश स्टलहरुमा अवलोकनकर्ताहरको भिड लागेको देखियो ।
६५ विभिन्न कम्पनीका ९० स्टल रहेको प्रदर्शनीमा प्रविधिका पछिल्लो संस्करणहरुवारे जिज्ञासा राख्ने र खरिद गर्नेहरुको बाक्लो उपस्थित रहेको पाइयो । कमटेकमा सहभागी कम्पनीहरुले ल्याएको विभिन्न आकर्षक अफरहरुले अवलोकनकर्ताहरुलाई थप आकर्षित गरेको देखिन्छ ।
मेलामा नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्ने र आकर्षक अफर ल्याउने क्रम तेस्रो दिन पनि जारी रह्यो । कमटेकको शिर्ष प्रायोजक सुविसु केवलनेटले ल्याएको हाइस्पिड इन्टरनेरनेट र क्लियर टिभीको विशेष अफरमा अवलोकनकर्ताको आकर्षण रह्यो । सुबिसुले कमटेकलाई लक्षित गर्दै १२ सय रुपियाँमा ७ एमबीको अनलिमिटेड फाइबर इन्टरनेट ल्याएको छ । साथै ६० एमबिपिएसको इन्टरनेट २ हजार १ सय, ३० एमबिपिएसको इन्टरनेट एक हजार ७ सय र १० एमबिपिएसको इन्टरनेट एक हजार ४ सय रुपियाँमा उपलब्ध गराएको छ ।
साथै सुबिसुले २०० भन्दा बढी डिजिटल र एचडी च्यानलहरू ल्याएको घोषणा गरेको छ । योसँगै सुबिसु नेपालकै सबैभन्दा बढी एचडी र डिजिटल च्यानलहरू उपलब्ध गराउने कम्पनी बनेको जारी विज्ञप्तिमा छ । स्पोर्ट, मुभिज, म्युजिक र इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड एडभेन्चर एन्ड लाइफ स्टाइललगायत विभिन्न च्यानलहरू ग्राहकको मागअनुसार उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ ।
कमटेकको डायमन्ड स्पोन्सर नेपाल टेलिकमको फ्रि सिम अफरमा पनि सेवाग्राहीको घुईचो लाग्यो । टेलिकमले रु. ५० मा रु. ५० कै ब्यालेन्स भएको जिएसएम प्रिपेड सिमकार्ड उपलब्ध गराएको छ भने फोरजी इन्टरनेट सेवाबारे पनि जानकारी गराएको छ ।
गोल्ड स्पोन्सर नेटिसले पछिल्ला मोडलका राउटर र स्विचहरु विशेष छुटसहित प्रदर्शनीमा राखेको छ । हाल बजारमा लोकप्रिय रहेको नेटिसको डब्ल्युएफ२४०९ई मोडेलको ३०० एमबिपिएस वायरलेस एन राउटर र डिएल४३२३ मोडेलको ३०० वायरलेस एन एडिएसएल २ प्लस मोडेम राउटर कमटेकमा पनि आकर्षण केन्द्र बनिरहेको छ ।
प्रिन्ट स्पोन्सर हाइसेन्सले आफ्ना फोरके स्मार्ट टिभीसहित विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स प्रडक्टहरुको विशेष प्रदर्शनी गरिरहेको छ ।
यसपटकको कमटेकमा आउने अवलोकनकर्ताका लागि निकै आकर्षक स्किम पनि छ । रु. ५० रुपियाँको टिकेट खरिद गरेर मेला आउँदा सनराइज बैंकले रु. २ सय रुपियाको बैंक खाता खोल्न पाउने सुविधा दिएको छ ।
साथै खल्ती पेमेन्ट सिस्टमले हरेक दिन लक्की ड्रमार्फत् २० इन्चको टिभी उपहार दिइरहेको छ । साथै कमटेकमा खरिद गरेको टिकेटबाट प्रत्येकले १० रुपियाँ आफ्नो एकाउन्टमा जम्मा गर्न सक्ने खल्तीले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै दराज एपबाट ल्यापटपको खरिदमा ३० प्रतिशत छुटका साथै ६ महिना निःशुल्क वाइफाईको समेत व्यवस्था गरेको छ । राजेश मोबाइल स्टोरद्वारा सिजी, एमआई, ओप्पो लगायतका फोनहरुमा ८ देखि १२ प्रतिशतसम्मको छुट र निशुल्क बिमा समेत उपलब्ध गराएको छ । कमटेकमा साथी कम्प्युटरस् द्वारा ल्यापटपको खरिदमा ल्यापटपका एसेसरिज सामानहरू सित्तैमा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
मेलामा बारकोड नेपालले ल्याएको जेडकेटेको ब्रान्डको एक्सरे मेशिनमा अवलोकनकर्ताको निकै भिड देखियो । यो उत्पादनमा डाइनामिक पिक्चर स्विचिङ, रिलायबिलिटी, नेटवर्क इन्टरफेस, इमर्जेन्सी स्विच लगायतका उत्कृष्ट विशेषता रहेको कम्पनीले जानकारी दियो । कम्पनीका अनुसार यो मेशिनमा एकैपटक ६ हजारभन्दा बढी इमेज स्टोरेज गर्न सक्ने क्षमता यसमा रहेको छ ।
त्यसैगरी डिकेड इन्टरनेश्नलले ल्याएको वाकीटकी र जिपिएस ट्रयाकर सिस्टममा अवलोकनकर्ताको आकर्षण रह्यो । कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार आपतकालीन समयमा उपयोगी हुने जिपिएस ट्रयाकर गाडी, मोटरसाइकल आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी सागर ग्रपले प्रदर्शनीको अवसरमा सार्वजनिक गरेका कोनिका माइनोल्टाका फोटोकपी र प्रिन्टर मेशिनले अवलोकनकर्ताको ध्यान तान्यो । कोनिका माइनोल्टाका ए थ्री साइजको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट र कलर दुवै फोटोकपियर÷प्रिन्टरहरुमा क्यान अफरस्वरुप १५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदर्शनीमा जोनरिच ब्रान्डको पोस सिस्टम (आइडी कार्ड प्रिन्टर), एनइसी ब्रान्डको एनइसी ब्राण्डको भी सिरिजका नया प्रोजेक्टर र पिएबिएक्स इन्टरकम सिस्टम पनि कमटेक अवलोकनकर्ताको रोजाइमा पर्यो । त्यस्तै क्लाउड लिंक एन्ड सेक्युरिटी इन्टरप्राइजले भ्युसोनिक प्रोजेक्टरमा ८ हजार रुपियाँ छुटसहित ५ हजार मूल्यको म्यानुअल स्क्रिन र १६ जिबीको पेनड्राइभ निःशुल्क दिएको छ ।
यसैगरी एसएलटी प्रालिले वाइफाई स्विच, मोसन सेन्सर, बिजुली ढोका लक प्रणालीहरुमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
कमटेकको यसपटकको मुख्य आकर्षण भने सेक्युरिटी प्रडक्टमा देखिएको छ । सेक्युरिटी प्रडक्टका लागि छुट्टै प्याभेलियनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा अवलोकनकर्ताहरुले विभिन्न उपकरणहरु सिसिटभी, एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम, सेन्सर अलार्म, स्टाफ एटेन्डेन्स, फायर र स्पोक डिटेक्टर, फायर फाइटर आदिको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्ने छन् ।
कमटेकमा विभिन्न कम्पनीले राखेको स्वास्थ्य परिक्षण मेसिनहरु पनि अवलोकनकर्ताहरुको नजरमा प¥यो । कमटेकमा उत्पादन मात्रै होईन प्रविधि तालिम दिने विभिन्न ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट र सफ्टवेयरका स्टलहरु पनि अवलोकनकर्ताहरुको नजरमा प¥यो । ब्रोडवे इन्फोसिस, सुपर ब्रेनलगायतका आइटी तालिम प्रदायकले यस अवसरमा आफ्ना कक्षामा अफर ल्याएका छन् ।
कमटेकको अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई प्रवेश शुल्क ५० रुपैंया र विद्यार्थीहरुलाई २५ रुपैंया तोकिएको छ । यसपटकको कमटेकमा आउने अवलोकनकर्ताका लागि निकै आकर्षक स्किम पनि छ । रु. ५० रुपियाँको टिकेट खरिद गरेर मेला आउँदा सनराइज बैंकले रु. २०० रुपियाको बैंक खातामा राखिदिने सुविधा दिएको छ । कमटेक अवलोकनका लागि अनलाईन टिकटको व्यवस्था समेत मिलाईएको छ भने सूचना प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिने उद्धेश्यले अनलाईन टिकट खरीदमा २० प्रतिशत छुटसमेत प्रदान गरिएको छ ।
आइतबार, २३ मङ्सिर, २०७५
कहाँ पढ्ने बिएससी सिएसआइटी ​​​​​​​ ?
सोमबार, १५ असोज, २०७५
आइसिटी फर स्मार्ट कम्प्युटिङ थिममा 'नेस्कोआइटी २०१८' आयोजना हुदै
द ब्रिटिस कलेजका २२५ जना विद्यार्थी दीक्षित गरी सम्पन्न भयो 'दीक्षान्त समारोह'
सामसुङले ५ जी नेटवर्क भएको स्मार्टफोन ल्याउदै
२०२६ सम्म विश्वभर निःशुल्क वाईफाई प्रदान गर्ने चिनियाँ कम्पनीको घोषणा
आइटी सरोकारवाला एकै ठाउँमा : कसले के भने ?
Xiaomi smartphone price in Nepal
सुजुकीको स्टाइलिस स्कुटर बर्गम्यान स्ट्रिट १२५
सिटिसी मलमा मोबाइल तथा ल्यापटप मेला लाग्दै, किस्ताबन्दीमा किन्न पाइने
एक दिन कृतिम सुर्य सञ्चालन गर्न २० लाख खर्च लाग्ने
आइसिटीमा ५ वर्षमा एक लाखलाई रोजगारी, श्रममन्त्री भन्छन्, ‘देशैभरी रोजगारी सिर्जना गर्दैर्छौं’
नेपाल नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप (एन्पीनोग) ले मंसिर २३ देखि सूचना प्रविधि सम्मेलन गर्दै
नेपालमा ओपोको पहिलो आर सिरिज 'आर १७ प्रो' सार्वजनिक हुदै